Nike-ka cusub ee loo yaqaan 'Adapt Huarache' ayaa adkeeya ama dabciya Siri | Wararka IPhone
Nike-ka cusub ee loo yaqaan 'Adapt Huarache' ayaa adkeeya ama dabciya Siri
Nike waxay sii waddaa inay noqoto shirkad si dhow ulashaqeysa Apple iyo labada noocba waxay hirgaliyaan teknoolojiyad cusub oo umuuqda runti mustaqbal. Xaaladdan oo ah nooca cusub ee Nike Adapt Huarache ayaa awood u leh inay si toos ah u xidhaan ama u sii daayaan xadhkaha markaan weydiinno Siri ama loo maro barnaamijka Nike ee loogu talagalay Apple Watch.
Tani waa wax la mid ah wixii ay sameeyeen Nike Adapt BB, kabo hore oo kaas ah mahadsanid nidaamkaaga FitAdapt Waxaa lagu hagaajin karaa cagtooda taas oo ay ugu wacan tahay codsiga taleefankeena casriga ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay ku dareen badhan Nike naftooda u oggolaanaya in ficilkan la qaado.
Mustaqbalku waa waxa jira
Waana inay jiraan dhowr nooc oo isboortigaan ah oo saxiixa uu bilaabay oo kuwan farsamada la hagaajiyay lagu daray si aan u qaban karno ficilka adkeynta ama dabcinta mahadnaqa Siri ee ka socda iPhone ama barnaamijka. Sidoo kale barnaamijka waan beddeli karnaa midabka LED-ka kabaha isboortiga markasta oo aan dooneyno Hadana waxay kuxirantahay jawigayaga, runti waxay umuuqdaan kuwa cajiib ah.
Laga soo bilaabo wixii aan awoodnay inaan ka aqrino warsaxaafadeedkeeda, Siri toobiye ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu adkayn karo ama lagu dabcin karo Nike Adapt Huarache cusub. Qiimaha, ma hayno wax rasmi ah waqtigan, waana inaan sugnaa inta aan eegno inta ay ku iibinayaan Nike. Kuwaan Huarache waxaa laga iibsan karaa laga bilaabo Sebtember 13, seddex maalmood ka dib soo bandhigida moodooyinka cusub ee iPhone-ka iyo alaabooyinka kale ee Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Nike-ka cusub ee loo yaqaan 'Adapt Huarache' ayaa adkeeya ama dabciya Siri
Kiisaskaas awgood waan shakhsiyeyn karnaa oo ilaalin karnaa AirPods-keena
Plex si ay u bixiso filimo xayeysiis xayeysiis ah ka dib markii ay heshiis la gaareen Warner Bros